नेपाली काँग्रेसले उदयपुरमा पनि मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी छनोट गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नं.१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागी डा.नारायण खड्का लाई छनोट गरेको हो ।
डा.खड्का नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सल्लाहकार तथा सहयोगी पनि हुनुहुन्थ्यो । डा.खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेदारी समेत सम्हालिसक्नुभएको छ । भोजपुरमा जन्मेका डा.खड्काले विद्यार्थी राजनीति मा प्रवेश गर्दै २०२३ साल बाट राजनैतिक यात्रा शुरु गर्नुभएको हो । राजनितिक गर्ने क्रममा डा.खड्का विराटनगर र काठमाडौंमा पटक पटक पक्राउ पर्नुभएको थियो ।
भारतबाट अर्थशास्त्रमा पी.एच.डि. गर्नुभएको डा. खड्काको विशेष रुचि अध्ययन र समाजसेवामा छ । पत्रपत्रिकामा उहाँका राजनीति र अर्थनीति सँग सम्बद्ध विश्लेषणात्मका लेखहरू प्रकाशित हुँदैआएका छन्। जनता सँगको निकट सम्बन्धले आफूलाई संविधानसभा निर्वाचनमा पटक पटक विजयी बनाएको बताउने डा. खड्का संविधानसभामा देशको आर्थिक विकास, बेरोजगारी उन्मूलन तथा सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मुद्दा प्रमुखतासाथ उठाउने र सधै जनताको हितमा काम गर्ने बताउनुहुन्छ ।